Published May 18, 2020 at 9:04 PM CDT
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay xaqiijineysaa in labo caruur ah oo ku nool bariga Iowa ay la xanuunsanyihiin xaalad la xiriirta COVID-19, oo loo yaqaanay cudurada ku dhaca cudurada badan.
Xarumaha Xakamaynta Cudurku waxay soo sheegeen in ciladdu ay keento qandho iyo caabuq u baahan kara daawayn dhakhso leh.
Agaasimaha caafimaadka gobolka wuxuu leeyahay carruurta iyo qoysasku waa inay raacaan tilmaamaha caafimaadka. Kuwaas waxaa ka mid ah gacmo-dhaqid joogto ah, jahawareer bulsho iyo isticmaalka maro wejiga daboola haddii aadan awood u yeelan inaad xajiso fogaan ah lix fuudh.
Labada carruur ah ee ku nool bariga Iowa ayaa hadda ku sugan xaalad deggan.
Warbixinnada warbaahinta qaranka ayaa muujinaya saddex carruur ah oo ku nool magaalada New York ee u dhintay cudurkaas.
Saraakiisha gobolka ee Iowa ayaa sidoo kale ka warbixiyay seddex dhimasho oo dheeri ah oo ka dhashay dhibaatooyinka COVID-19. Taasi waxay ka dhigeysaa wadarta guud ee 355 qof.
Waxaa jiray hal dhimasho oo dheeri ah oo ka dhacday Woodbury County wadarta 18. Dhimasho kama dhicin degmada Dakota. Waxaa jira 10 dhimasho ah oo ka jira Gobolka Dakota. Labada degmo ayaa leh wadar ahaan in kabadan 3,800 xaaladood oo qumman iyadoo 700 kale oo dheeri ah ay ku sugan yihiin Woodbury County
Warbixinnada ay soo saareen wakaaladda wararka ee Associated Press waxay goaansadeen inay baaraan warshad hilibka doofaarka Iowa ka dib markii ay heleen cabasho ay ku soo oogayaan dadaallo aan ku filnayn oo lagu joojinayay faafitaanka coronavirus.
Dacwad ka dib Abriil 11-keedii OSHA ayaa sheegay in shaqaalaha ka shaqeeya warshaddii Tyson Foods ee ku taal Perry, Iowa, ay ka shaqeeyeen “xusulka xusullada” iyo in fogeynta bulshada ay ku dhowdahay wax aan macquul aheyn.
Rikoorrada ayaa muujinaya Iowa OSHA waxay sugtay sagaal maalmood ka hor intaan lala xiriirin Tyson, oo qaadatay sideed maalmood in laga jawaabo.
Toddobaad ka dib, gobolku wuxuu ku dhawaaqay 730 shaqaale oo la tijaabiyey.
Iyo, maqnaansho Isniintii laga soo sheegay adeegga fiilada iyo internetka ee Sioux City. Barta Facebook ee shirkadda Sparklight ee adeeg bixiyaha ayaa leh xarig fiber ayaa la jaray taas oo keentay arrinta.
Local News LocalIowaNebraskaSouth DakotaTyson FoodsnewsCOVID-19SomaliSparklightOSHA
Saddex qof oo dheeri ah ayaa u dhintey dhibaatooyin la xiriira COVID-19 oo ku nool agagaarka isgoyska Sioux City. Waaxda Caafimaadka ee Degmada Dakota…